Beijing waxay mamnuucday dhammaan diyaaradaha yaryar inay dul maraan Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Beijing waxay mamnuucday dhammaan diyaaradaha yaryar inay dul maraan Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Mamnuuciddu waxay mamnuucday in dhammaan farsamada duulista ee yaryar ay ku socdaan xawaare hooseeya oo loo isticmaalo ciyaaraha, xayaysiinta, madadaalada, iwm.
Saraakiisha magaalada Beijing ayaa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah loo mamnuucay dhammaan duulimaadyada diyaaradaha yar yar ee hawada caasimadda Shiinaha.
Xayiraad dhammaystiran oo ku saabsan hawlgalka dhammaan diyaaradaha duulista ee hawada sare ee Beijing iyo degmada ku dhow ayaa la ansixiyay ka hor Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka 2022 ee Shiinaha wuxuuna dhaqan galayaa inta u dhaxaysa Janaayo 28 iyo Maarso 13.
Marka la eego qiyaasta lagu dhawaaqay, BeijingDeganeyaasha iyo martida waa laga mamnuuci doonaa inay isticmaalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, soo saaridda buufinnada, duuliyayaasha hang-gliders, iyo wixii la mid ah. Haddii mamnuucidaan la jebiyo, ciqaabta maamulka iyo kuwa kale waa la dhaqan gelin doonaa.
The Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka 2022 ee caasimadda Shiinaha ee Beijing Waxaa loo qorsheeyay in la qabto Febraayo 4-20, halka Ciyaaraha Jiilaalka ee Paralympic la qaban doono Maarso 4-13.
Intii lagu jiray kalfadhigii 128aad ee IOC ee Kuala Lumpur bishii Luulyo 31, 2015, Beijing ayaa loo doortay inay martigeliso Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka iyo Paralympic 2022 taasoo ka dhigaysa caasimadda Shiinaha magaaladii ugu horreysay ee abid martigelisa Ciyaaraha Olombikada xagaaga iyo Ciyaaraha Olombikada (2008) iyo sidoo kale Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka iyo Paralympic (2022).
Beijing waxay ku guulaysatay inay martigeliso Olombikada 2022 iyo Paralympics Tartan adag, oo ka adkaaday Almaty's Kazakhstan 2015, isagoo 44 cod ku helay 40 cod.